Nye Ka S Na-eziga Ozi E-mail? | Martech Zone
Friday, February 25, 2011 Sunday, Jenụwarị 13, 2013 Douglas Karr
Otu enyi zitere m ozi taa banyere ọrụ na-atọ ụtọ maka itinye ihe omume igwe mmadụ, zụọ na ozi ala yana ndepụta email gị akpọrọ Njikọ Njikọ. Ọrụ ahụ na-enye gị ohere ịgbakwunye koodu hash na listi email gị iji chekwaa adreesị email gị. Upload bulite koodu hash gị (igodo ezoro ezo nke etinyere na adreesị ozi-e pụrụ iche) na ọrụ ahụ ma tinye data ahụ.
Imirikiti ndị na-ere ahịa email na-enwe mmasị na ya Ọzọ ndị debanyere aha, mana etinyela uche na mkpa dị nke ndị ahụ ndị debanyere aha. Ogbe na ntiwapụ bụ usoro ochie ma jiri nwayọ wepu email gị ma rụpụta mkpesa ndị ọzọ, wepu aha na ntinye aka site na ọnụego na ntụgharị. Chọpụta ọdịdị mmadụ ndị nwere aku na ị ga-enye gị ohere ịkwụsị ọgbụgba ọkụ na ịmalite ịkekọrịta ndepụta gị. Site na ịkọwa ozi ziri ezi na onye debanyere aha ya, ị ga-ahụ mmụba dị ịrịba ama na ntụgharị.
Anyị na-eji koodu nzuzo hash email echekwara echekwa iji dakọtara ndị ahịa gị ihe karịrị ijeri ihe ọmụma 50-nke ụwa ma mepụta profaịlụ zuru ezu nke ndị debanyere aha gị. Naanị bulite koodu hash gị na n'ime nkeji ị ga-enwe nghọta zuru ezu banyere ndị ahịa gị gụnyere omume igwe mmadụ, ọdịmma, omume ịzụta, ọnọdụ na ọtụtụ ndị ọzọ. Site na Njikọ Njikọ saịtị.
Ọ dị ka Njikọ Njikọ ebugharịla mgbịrịgba na whistles niile wee debe nke a n'ụzọ dị mfe ma nwee nchekwa nke itinye data. Enwere m obi ekele mgbe ndị mmadụ na-edebe ọrụ ndị a dị mfe dịka nke a! Kpọọ ha maka a ikpe n'efu.
Kevin onye ndu
Nke a nwere ike bụrụ nnukwu enyemaka na ịdebe ndị debanyere aha m. Aga m anwale ihe a.